Omnye weMithetho emithathu e-Gun-Related Related
Kubonakala ngathi kucinga ukuba abantu baphumelele ekudambiseni amandla kunokuba amapolisa, umlawuli weDemokhrasi uye wazisa umthetho oya kuvimbela abaninzi baseMerika ukuba babe nezixhobo zenyama .
Ukuqhubela phambili ukukhuthaza oko akubiza ngokuthi "i-ajenda eqhubekayo yexesha eliqhelekileyo," uMike Honda (iD-California) uqalise uMthetho weZiko lokuPhathwa kweMpahla yoLuntu (HR 378), owawuya kuvimbela bonke abaseMelika "ngaphandle kwabasebenzisi abathile abanegunya, njengabaphenduli bokuqala kunye ukunyanzeliswa komthetho, "ekubeni neenqwelo zomzimba eziphuculweyo okanye zeTi III.
Isixhobo sombutho weNqanaba III sinyithi kwaye sinzima kunezixhobo zeNqanaba I, II ne-III, kodwa zisenokugqithwa phantsi kweengubo. Iinqwelo zeNqanaba III zenzelwe ukuyeka iibhola ezinzima kakhulu, njengalezo zikhutshwe .44 Izixhobo zombane ze-Magnum kunye ne-9-mm.
Ngokucacileyo, ibhajethi ichaza "iinqwelo zomzimba ezomeleziweyo" njenge "isigqoko somzimba, kubandakanywa isigqoko okanye isikhoselo, ukuxhatshazwa kwamabhola okudibeneyo okanye okugqithiseleyo ukusebenza kwebhola ye-Type III, esetyenziswe ngokusebenzisa iNational Institute of Justice Standard-0101.06."
Ngeniso, uMqulu we-Honda uzakuvuna kwakhona ubunini bebucala be-Type IV yezixhobo zomzimba, eziye zenzelwe ukuyeka iibhola ezinzima, kwaye zihlala zigcinwe kuphela ngamapolisa kunye nabasemkhosini.
Ngaphandle kokukhankanya ukuba izigwenxa nazo zivinjelwe ngumthetho ukuba zibe nezibhamu, kodwa, u-Rep. Honda uyaxhoma ekukhutshweni kweendaba ukuba ukuvinjelwa kwezixhobo zomzimba ziza kwenza "ukuthotyelwa komthetho ukuphendula kwiimeko zokudubula ngokucokisekileyo."
Ngokubhekiselele kwi-Rep. Honda, ibhajethi inenkxaso ye-Peace Officers Research Association kunye ne-California State Sheriff's Association, ephikisanayo yokuba akukho sizathu sokuba abantu bembethe iinqwelo zenyama ze-Type III, njengoko kuhloselwe kuphela ukusetyenziswa kwempi. Imibutho yokunyanzeliswa komthetho ichaza ukuba abaphangi babeza kusebenzisa izixhobo zempahla ukuze bazikhusele kumapolisa.
Ibutho leMpahla yaseBan nje Ingxenye yePhakethi yeBill 3
Ukuyeka ukuyeka ukuvalela abantu ukuba bangabhinqa izixhobo zomzimba kwimigudu yakhe yokunciphisa umonakalo onokubangelwa yizibhamu kunye nabo bafuna ukulimaza nabo. ukuba izixhobo zifumana njani ezandleni ezingafanelekanga ngoku. "
Ngokubambisana noMthetho wakhe wokuXhobisa uMzimba weCandelo loKhuselo, i-Honda yazisa:
UMthetho we-Accountability Act (HR 377), uza kufuna izibhamu ezidibeneyo okanye ezenziwe ekhaya ukuba zilawulwe phantsi kwemithetho efanayo yomthetho njengemipu eyenziwa ngumbane kwaye ithengwe. Umzekelo, kufuneke ukuba zonke izibhamu zenziwe ngamanqaku angasigxina, zivumela ukuba amapolisa abuyele kubanikazi bawo ukuba asetyenziselwa ukuthunyelwa kolwaphulo-mthetho.
Umthetho wokuLawulwa kweMibhobho yasekhaya yase-Home (HR 376), uya kuvimbela ukuthengiswa kunye nokuthengwa kwe "abamkelekileyo abasemgangathweni," i-assembly engundoqo yebhamu ekwazi ukuguqulwa ngokulula ibe ngumpu osebenzayo xa uthengiweyo. "Ukunqabela ukuthengiselana kuya kuncitshisa kakhulu inani lezixhobo ezingenakuthenjwa ezitratweni zethu," kusho uMc.
Amabhilidi e-Honda amelayo aya kuzalisa imingxuma emigqomo kwimithetho yesihlunu yesizwe sethu eyenza kube lula kakhulu kubaphangi, abathengisi bamashishini, kunye nabaphuli-mthetho abaqhelekileyo ukwakha izibhamu zendlela yokuzikhusela emzimbeni kunye nokufumana izixhobo zomzimba zesikhokelo, "kusho uKristen Rand. UMlawuli weZiko leNkqubo yoPhatlo loBundlobongela kwi-Rep.
"Izibhamu eziprintiweyo ze-3D zihlala zingavunyelwanga kwaye ukuthotyelwa komthetho kubonakala kubungozi," wongezelela uBrian Malte, uMlawuli oyiNtloko weNkqubo kaZwelonke weBrady Campaign yokuVimba ulwaphulo lweGunduma. "Siwagcoba i-Rep. Honda ukuzisa umthetho ukulawula i-3D ibhanku epapashwe ukukhusela abantwana bethu noluntu."
I-albhamu ye-Hip-Hop yama-Best Best 2006
Ngaba Iingubo Zama-Acrylic Ziya Kukuxhatshazwa Ngamaqondo Okubanda Kwemvula?
Ziziphi Iindawo Ezigqibeleleyo-Ukunambitha Intlanzi Yamanzi Aselwandle?